Gebze Halkalı Izikhululo zeebhasi zaseMarmaray | RayHaber
ikhayaETURKEYSithili saseMarmara34 IstanbulGebze Halkalı I-Marmaray iyakuma iiHora zokuhamba
08 / 11 / 2019 34 Istanbul, ZoThutho, railway, JIKELELE, KENTİÇİ Rail Systems, ZOMHLATHI, Sithili saseMarmara, Metro, ETURKEY
Imephu kaMarmaray neGeze Halkalı IMarmaray Stops kunye neShedyuli: IMarmaray, iprojekthi edibanisa amazwe aseYurophu nase-Asiya e-Istanbul Halkalı Unokufumana yonke inkcazelo malunga nokuyeka kunye namaxesha e-Gebze ngaphantsi komxholo. Halkalı IGebze Suburban Line 2019 ibandakanya imigca ehlaziyiweyo ngaphakathi komda weprojekthi yeMarmaray. Halkalı Kwezi ndaba sinikezela ngolwazi malunga neeGebze Metro Line Station Halkalı Unokufumana zonke iinkcukacha malunga neeMarmaray Expedition Hours.
Ifumaneka kwicala laseYurophu iMarmaray Halkalıkwaye iqala kwiGeze. Kwinqanaba laseYurophu Halkalı kunye neKazlıçeşme Marmaray, ngelixa icala leAnatolian linikezela ngothutho phakathi kwe-Ayrılık Fountain neGebze. Abantu base Istanbul bazi kakuhle ukuba inyathelo lokuqala lale projekthi lathatyathwa yi-Kazlıçeşme Sepgment Fountain line eqhagamshela i-Anatolian Side ne-European Side.
Iindawo zemicimbi e Marmaray: Halkalı Njengoko kuchaziwe apha ngasentla kwiGebze Indawo ye42 ibekwe. Halkalı kunye nexesha elipheleleyo phakathi kweGeze ukuyeka liya kwehla kumzuzu we-115. Ngokufutshane Halkalıiyahamba Imizuzu ye115 angala Iiyure ze-1 iiyure ze-55 ndiza kuba seGebze. Nceda ubone imephu yeMarmaray ngolwazi oluthe kratya!
Imephu ye-halkali gebze metro - marats
Halkalı Kukho amaninzi atshintsho kwiMetro Metro. Halkalı Ungayibona imigca yemetro kwaye uyema uya kugqithisa ngeGebze Metro Line engezantsi:
Halkalı I-Gebze yoThutho lweeTriki iiThuthi zeeTriki kunye neeMathebhile
Gebze Halkalı IMarmaray Iiyure zoLwelo
Gebze-Halkalı Marmaray uyayeka
Halkalı Xa Uvula I-Gebze Umtya Wendlela
Halkalı Ixesha lokuvula i-Gebze Metro Line
Halkalı-Gweba umgca we-Marmaray uza kuvulwa nini